COVID-19 ရဲ့ ပွဲသိမ်း ဘယ် လို ဖြစ် မ လဲ? – Let Pan Daily
COVID-19 ရဲ့ ပွဲသိမ်း ဘယ် လို ဖြစ် မ လဲ?
COVID-19 ရော ဂါ ပြီးဆုံး ပုံနှင့် ပတ်သက်သမျှ ကြိုတင်ခန့် မှန်းချက်များအားလုံးက တွေးဆ ချက်များသာဖြစ်သည်။
သို့သော် ယင်းကို အဆုံးသတ်ရာတွင် ယခင် ကပ်ရောဂါများကို ကျော်လွှား ခဲ့သည့် နည်းလမ်းများအားလုံးအ ပြင် ပွဲသိမ်းပေးမည့် အခြားကိစ္စရပ်များလည်း ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါ လိမ့်မည်။
နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာ ခွာနေခြင်းကို ဆက်လက် ကျင့်သုံး ခြင်းဖြင့် အချိန်ကိုတိုတောင်း အောင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာနေခြင်း (Social Distancing) ကဲ့ သို့သော ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ကို မည်သည့်အချိန်တွင် အဆုံး သတ်နိုင်မည်ဟူသည့် ဖော်မြူလာ အတိအကျ တွက်ထုတ်နိုင်ရန်မှာ မူ ရောဂါကိုတုံ့ပြန်ရာတွင် အစိုးရ များက မည်မျှထိရောက်အောင် တုံ့ပြန်သနည်း၊ ပြည်သူလူထုက ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကန့် သတ်ချက်များကို မည်မျှလိုက်နာ သနည်း စသည့်အချက်များပေါ် တွင် မူတည်ပါသည်။
ဥပမာအား ဖြင့် ဟောင်ကောင်၊ တောင်ကိုရီး ယား စသည့်နိုင်ငံများ ကဲ့သို့ ရော ဂါပိုးကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆောင်ရွက်ကြ သည့် နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဥရောပ၊ အမေရိကန်စသည့်နိုင်ငံ များက နောက်ကျပြီးမှသာရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်စဲ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
‘‘ကမ္ဘာ့ကပ် ရောဂါကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ လူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံ ရေးပေါ်မူ တည်တယ်’’ဟု ကိုဘီ ကဆိုသည်။
ကျန်ရှိနေသော ၅၀ ရာခိုင် နှုန်းမှာ သိပ္ပံပညာ ရပ်ပေါ် မူတည် နေသည်။
သုတေသီများက ဘယ် ခေတ် ဘယ်အခါနှင့် မျှမတူအောင် စုဖွဲ့ကာ ရောဂါကိုတိုက်ထုတ်နိုင် မည့် ဆေးဝါးများကို မျက်နှာစာ အသီးသီးမှ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နေ ကြသည်။
ရောဂါမှ ပြန်ကောင်းလာ သည့်လူနာ များတွင် ခုခံအားရှိနေ သေးကြောင်း အထောက်အထား ဖြစ်သည့် SARS-CoV-2 ကို တုံ့ ပြန်သည့် ပဋိပစ္စည်းများကို စစ် ဆေးရှာဖွေနိုင်သည့် နည်းလမ်း ကလည်းအသုံးဝင်ကြောင်း တွေ့ ရှိရသည်။
ကရမ်မာနှင့် လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် များက ယင်းစမ်းသပ် နည်းကို တီထွင်ဖန်တီးနေသည်။
၎င်းတို့နည်းတူ အခြားတီထွင် ထုတ်လုပ် နေသူများလည်း ရှိ သည်။
အနည်းဆုံးတော့ဖြင့် လူ များ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းပဋိပစ္စည်း ဖြစ်ပေါ်မှုကို တိုင်းတာစ စ်ဆေး ကာ ပဋိပစ္စည်းပမာဏ မြင့်မားသူ များကိုဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် သို့ မြန်မြန်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေး နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရောဂါကူးစက်မှုကို ရပ်တန့် ရန်မှာ ကာကွယ်ဆေး က အဓိက ဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ဆေးထွက် ပေါ်လာဖို့က အချိန်ယူ ရမည်ဖြစ် သည်။
သို့သော်ကာ ကွယ်ဆေးတစ်ခုခုက ရောဂါထိန်း ချုပ်ရေးကို ထိထိ ရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆ ချက်အတွက် ကျိုးကြောင်းဖော်ပြ ချက်ရှိပါသည်။
တစ် ခါတစ်ရံတွင်တော့ ပြင်းပြင်းထန် ထန်ဝေဒနာများ ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့် မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
ဗိုင်းရပ်စ် က လူသားထုကြား ကာလရှည် ကြာစွာနေထိုင်လာသည် နှင့်အမျှ ကလေးငယ်များသည်လည်း ကူး စက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အခြားဗိုင်းရပ်စ် များကဲ့သို့ပင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သည်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူ သားများ နှင့်အတူ ဆက်လက် တည်ရှိနေပါလိမ့်မည်။
သို့ သော် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကပ်ဆေးမိုးရွာ မည့် ရောဂါ တစ်ခုတော့မဖြစ်နိုင် ပါချေ။
(၁၈.၀၁.၂၀၂၁) မှ (၂၄.၀၁.၂၀၂၁)အထိ တဈပါတျစာ အထူးဟော စာတမျး
ပုဂံက ထူးထူး ခြားခြား နာမည်တွေ နဲ့ ဘုရားတွေ ဖြစ်တဲ့ မလာဖြစ်ဂူဘုရား နဲ့ မလုံးဖြစ်ဂူဘုရား သမိုင်း (ဖြစ် ရပ် မှန်)
နောက်(၂)ရက်အတွင်း တစ်ပြည်လုံးနီးပါး မိုးပိုလာနိုင်သည့် အခြေအနေ မိုးဇလ ထုတ်ပြန်